XAQA GABADHA GABADH KASTA OO SOMALIYEED KU LEEDAHAY… | shumis.net
Home » galmada » XAQA GABADHA GABADH KASTA OO SOMALIYEED KU LEEDAHAY…
XAQA GABADHA GABADH KASTA OO SOMALIYEED KU LEEDAHAY…
Xaqa Gabadha Gabadh Kasta Oo Somaliyeed Ku Leedahay…gabdhuhu waxay leeyhiin xaq, ha ahaato inta ay reerkooda joogaan ee aan la guursan iyo kadib marka la guursadaba. Diinteena islaamkuna dumarka xaqooda way ilaalisay sharafna way u yeeshay.
Hadaba wakhtiga aan ku jirno xidhiidhka u dhexeeya dumarka iyo raga waa isbadalay marka loo eego wakhitigii hore. Taasna waxa sabab u ah casrigan aan ku jirno iyo tiknoolajiyada la gaadhay, taas oo inta badan si gaar ah saamayn ugu yeelatay dhaqankii iyo dabeecadii dumarka.
Hadaba hadaan usoo laabto dhinaca somalideena, dhaqanka somalida iyo ka islaamkuba waxay masuuliyada u dhiibeen ninka, taas oo ku tusinaysa in ninku uu mudnaanta leeyahay, laakiin taasi maaha in gabadhu aanay awood ku lahayn reerka. Qodobo dhawr ah ayaa ilaahay ninka ugu doortay inuu isagu gabadha ka yeesho mudnaanta oo uu noqdo masuulkaguriga.waxa ka mida
1.Ninka ilaahay wuxuu ku waa jibiyay inuu nafaqada reerkiisa bixiyo isagu,laakiin gabadha ku waajib maaha inay wax bixiso xataa haday lacag haysato.
2. Dumarku diin ahaan iyo aqli ahaabma ma dhamays tirna oo Nabiga scw ayaa sheegay arinkaas,wuxuuna sheegay inuu ilaahay tawfiiqda ka qaado cidii dumar talada u dhiibata
3.Dumarku abuur ahaan way iska qalbi jilicsan yihiin,sidaa darteed ayuu ilaahay mas’uuliyada uga khafiifiyay.
Hadaba wakhtigan aan ku jirno bulshada somalidu waxay u qaybsantaa laba qaybood; kuwo dalka gudihiisa ku nool iyo kuwo dalka dibadiisa ku nool. Dhinaca guurka markaan eengo, gabdhaha somalidu gaar ahaan kuwa dalka dibadiisa ku nool waxay jecelyihiin anay guursadaan wiil diin ,dadnimo iyo aqoonba leh. Aniga oo dhalinyar ahaan u hadlaya waxaan inta badan la socdaa sida ay gabdhaha somalidu u dhaqmaan marka ay noqoto xidhiidh,iyo qofka ay rabaan inay guurasadaan astaamihiisa iyada oo ay garab wadaan xuquuqdooda.
waxa laga yaabaa in aad si khaldan ii fahantaan markii aan ka hadlay gabdhaha oo kaliya. Anigu waxaan la dhashay gabdho badan oo dhabarkooda igusoo xambaaray.markaa gabdhaha aad ayaan u qadariyaa runtii oonan kaftan ahayn. Laakiin waxaan rabaa inaan idin tusiyo kaalinta gabadha iyo awooda ay ku leedahay guriga ay dhisayso. iyo waliba gabadha waxa looga baahanyahay inay ku dhaqanto haday rabto inay noqoto qof aad loo jecelyahay.
Gabadhu waxay xaq u leedahay reer wanaagsan iyo guri fiican inay samayso,dumarku waa hooyooyin, walaalo iyo waliba xaas ,waxayna mudanyihiin inay nolol fiican helaan.
Hadaba waxa jira in gabdhaha somalida gaar ahaan kuwa qurbaha ku nool inay saamayn ku yeelatay dhaqanka iyo dabeecada dumarka ajaanibta ah ee wadanka kula nool. Waxaan ognahay in dalalka reer galbeedka ay dumarka iyo ragu u siman yihiin awooda guriga, taas oo gabdhaheena somalida saamayn wayn ku yeelatay. Laakiin arinkani waxa uu dhib ku hayaa dadka muslimiinta ah iyo wadanada dhaqanka u leh inuu ninku talada yeesho, sida india iyo kuwa kale. Tani hadaba waxay keentay in bulshadeena somalidu kala kulmaan dhibaatooyin dhicana guurka ah iyo sida loo qayb sanayo masuuliyada reerka.
Inta badan waxaan maqlaa ama aan la socdaa in gabdhaha jawiga guurka ku jira ee diyaar u ah inay reer sameeyaan inay yidhaahdaan ” waxaan rabaa qof diinta iyo dhaqanka reer galbeebka isku dheeli tira”,hadaba waa su’aale sidee ayaan isku barbar dhignaa dhaqanka reer galbeedka iyo diinteena?..gabadh kastaa waxay jeceshahay inay hesho qof ixtiraama oo hadi iyo jeer garabkeeda taagan.sidee ayay ku heli kartaa, sidee ayay u hanan kartaa qalbiga ninka ay guursatay oo ay ku noqon kartaa qofka awooda guriga iska leh?..
Sidan ayay ku noqon kartaa gabadhu:
Horta aniga gabdho badan ayaa ila dhashay ,markaa ixtiraam ayay iga mudan yihiin runtii. Laakiin waxaan rabaa inaan sawir ka bixiyo sida ay gabadhu u noqon karto sayidka xaafa oo marka ay maqantahay xaafada waxba ay kala socon waayaan.
Sida aan ognahay, qoyska somaligu waxaa uu aad ugu tiirsanyahay hooyada in kabadan aabaha ,taasna waxay ku tusaysaa awooda qofka dumarkii ku leedahay xaafada. Anigu waxaan aad u xasuusta marka hooyaday ay safar u yara baxdo, in aan anigu aad u murugoon jiray iyo dhamaan xaafada oo dhan, marka ay raagtana waxan samayn jiray shalmad ama garbasaar ay leedahay aan agtayda dhigi jiray si aan uga uriyo carafteeda oo aan u dareemo inay agtayda joogto. Dhamaan dadka badidooduna hooyada way jecelyiihin in kabadan aabah.
Hadaba gabdhuhu way kala garaad badan yihiin oo ilaahay ayaa sidaa u sameeyay. Gabadhu marka ay rabto inay guursato waa inay jirtaa istaraatiijiyad ay ku dhaqmayso marka ay aqal gasho, oo waa inay is waydiisaa sidee ayaad ula dhaqmaysaa qofka aad guursanayso. Xataa haday wada socon jireen intayna is guursan ka hor,waxa jira dabeecado u qarsoon labadoobada oo marka ay wada sheekaysanayaan qof walba positive side-ka ayuu muujinayaa, markaa way adagtahay inay gabadhu wada ogaato dabeecada wiilka ay guursanayso.
Waxa loo baahanyahay gabadhu inay daraaso ku samayso dabeecada ninka. Qofka insaanka ah ma dhamays tirna oo wuxuu leeyahay dabeecadu fiican iyo kuwo aan fiicnayd. Markaa gabadha waxa looga baahanyahay inay u dulqaadato dabacadihiisa aan wanaagsanayn, marka ay rabto inay arin ka dhamaysato waa in ay kasoo martaa dhinaca dabeecadihiisawanaagsan.haday sidaa yeesho waxa laga yaaba inay maarayn karto arimaha qoyska.
Inta badan dumarku talada way kala qaataan oo wax ay dumarku usoo sheegeen ayay ula timaada ninkeeda,ama waxa ay rabtaa nolosha ay ku noolyihiin qayrkeed iyada oo aan eegayn xaalada iyo waxa uu awoodi karo ninkeedu. Taasna inta badan waxay dhalisaa khilaaf u dhexeeyada iyada iyo ninkeeda.
Waxa jira waxyaabo looga baahanyahay gabadhu inay samayso oo waajib ah iyo waxyaabo kale oo ay sameeyaan gabdhaha ilaahay khayrka la doonay. Hadaba gabadhu sidee ayay reerka ku hanan karta oo ay ku noqon kartaa in aanay cidna ka maarmin oo ninkeeduna aad uga dambeeyo.
Horta waa in ay adeecdaa ninkeeda taas oo ah waajib, haday ninka ku xumaato waxa laga yaaba inuu ilaahay u cadhoodo.
Waa in haduu wax u sheego rumaysataa oo aanay odhan kuma aaminayo
Waa inayna caayin isaga ama qoyskiisa,dadka horteedana ku bahdilin,caruurtana hortiisa aanay ku caayin
Waa in ay si fiican usoo dhawaysaa dadka uu jecelyahay ee u dhaw sida; waalidkiisa,walaalihii iyo waliba saaxiibadiisa u dhaw
Waa inay guriga uga soo horaysaa had iyo jeer haday suura gal tahay,hadayna wakhti badan shaqayn
Waa inay ka hor toostaa subaxii ninka oo dhaqankeena waa ceeb gabadhu inay kula toosto ama kaaga dambayso jiifka
Waxyaabaha aad usoo jiidan kara ninka waxa ka mida
Waa in ay labiskiisa ka eegtaa markuu subaxii baxayo, sida uu u shanlaysanayo iyo dharka nuuca uu xidhanayo waa inay ka tijaabisaa
Gabdhuhu dhinaca dhar iibsashada way ku fiicanyihiin oo dookha ayay si fiican u yaqaanaan.markaa waxa loo baahanyahay inay raacdo markuu dhar soo iibsanayo haday ka yara reer magaal santahay.
Haduuna isagu shaqo hayn oo iyadu ay shaqayso, waa inayna amar kutaaglayn oo ayna bahdilin,oo ay odhan aniga ayaa talada guriga leh,maadaama aan shaqeeyo. Waa in iyada oo ka awood badan hadana ixtiraam u muujisaa oo ay tustaa inuu isagu yahay ninka reerka. Qodobkaas in aad u yar ayaa dumark sameeya.
Khadiija bintu khuwayled ilaahay ha ka raali noqdee markay nabigeena NNKH guursatay iyada ayuu u shaqayn jiray,waxay ahayd haweenay maal qabeen ah. Hadana nabigeena udgoon NNKH way ka danbayn jirta oo isaga ayay talada reerka u daysay.nabiga si fiican ayay uga haybaysan jirtay,aqalka markuu soo galo way dajin jirtay haday murugo ka muuqato ama uu daalanyahay. Iyada oo hadana awood leh ayay nabiga talada u daysay. Marka ay dhib qabsato guriga ayuu iman jiray ,markaa ayay dajin jirtay, nabigu aad ayuu u jeclaa waayo khadiija ayaa jacaylka ka samaysatay.markay dhimatayna nabigu aad ayuu u murugooday,markaas ayuu ilaahay cirka u qaaday si uu u ilawsiiyo dhimasha khadiija.
Waa in ay gabadhu marka uu guriga soo galo wajigiisa eegta,haday wax murug ah ama dhibii ka muuqdaan waan inay waydiisa kadibna ay la xalisaa.
maanta hadaan nahay dhalinyarta somaliyeed,waxaan nahay dhalinta ugu nasiibka xun aduunka,dawalad maanta mustaqbalka dhalinyarta dhisaysa ma jirto. Nin walba meeshii itaalkiiso dhigay ayuu jooga.markaa waa kuwaa qax iyo tahriib kuwada jira. Gabadha somaliga waxa laga rabaa inaanay ula dhaqmin sida wiilka reer galbeedk ah ee aan waligii dhib arag. Markaa gabadhu waa inay iyada oo eegaysa xaalada dhalintu ku jirto ay u dulqaadataa,mar kastana waa inay hididiilo u dhistaa oo ay tidhaa “insha allah somalidu way hagaagi doontaa oo kharyka ayaa xigi doona”.markaa sidaa ayay gabadha gaaridaa lagu yaqaanaa.
Gabadhu waa inay muuqaalkeeda iyo nadaafadeeda ku dadaasha,si ay usoo jiidatoninkeeda.waa inay isagana kula talisaa inuu muuqaalkiisa hagaajiyo iyo nadaafadiisa.
Waa inay markuu wax cunayo iskala fadhiisataa hadayna wax shaqo ah hayn. Taasi waxay ku tusinaysaa gabadhu sida ay u waynaynayso ninkeeda.
Waa inay caruurta si fiican u xanaanaysaa, taasi waxay soo jiidanaysaa ninka oo laga yaabo inuu isaga oo eegaya caruurta in badan iska dul qaato.
Waa inay noqotaa la taliyihiisa gaarka ha ee anu ka maarmin.
Intaas oo dhan waxa koobsanaya dadnimada gabadha. Gabadha dadnimada leh waxa lagu yaqaanaa inay xataa hadii ninku uu yahay qof iska liita ay kasoo saarto nin halisa. Sidaa darteed somalidu waxay ku maahmaahday ” dumarbaa rag is dhaafshay”, taas oo macnaheedu yahay in gabadhu astaan u tahay horumarka ninka iyo quruxda faamaliga. Nin kasta oo heer gaadha xaaskiisa ayaa qayb wayn ka ciyaarta,hadii ayna wanaagsanayn way la dagaysaa.
Runtii maaha In gabdhah oo kaliya masuuliyadu saarantahay,laakiin gabadhu awooda ay ku leedahay reerka ayaa ka xoog badan ta ninka. Waa in ay ogaataa gabadhu in dhaqankeeda iyo dabeecadeedu tahay falaadho ay ku ganayso ninka, taas oo iyada dib ugu soo laabanaya. Markaa haday falaadhaha wanaaga ku tuurto isaguna wanaag ayuu soo celin,haday se xumaan tuurto tu lamida ayuu soo celin isna, oo dadka wixii la gashado ayaa kasoo baxa. Waxaa aan soo sheegnay haday samayso iyada ayay dib ugu soo laabanayaan,waayo qof walba waxa uu beero ayuu goostaa.
Markaa anigu waxaan kusoo xidhayaa hadalkayga in gabadha hor usocodka reerku uu gacanteeda ku jiro. Sidaa darteed waxaa loo baahanyahay in gabadhu iyada oo aanay cidi qasbayn inay is xilqaamto. Maaha haday gabadhu ninka ixtiraamto inay ka cabsanayso ama aanay awood lahayd, laakiin waa in iyada oo xataa ka awood badan ama ka lacag badna hadana isaga iska hor marisaa.
Markaa anigu waxaan odhan lahaa gabadha somalida ah in aanay ka fikirin sidii ay ninka iskaga celin lahayd ama xoriyadeeda u ilaashan lahayd. Iyada ayaaba ka dhigi karta ninka inuu wax walba u yeelo iyada oo aan qasbayn. Gabadhu haday rabto inay reer adag samaysato gacanteeda ayuu ku jiraa runtii iyo dadnimadeeda.
Gabadhu haday aqli badantahay jacaylka iyada ayaa ka samaysan karta ninka. Waan in ay ninka awood u leedahay inay dhanka positive-ka u badasho iyada oon dagaal ku hayn. Taas ayaa gabadha raaliyada ah, nin kastana uu jecelyahay inuu helo, ilaahayna uu jecelyahay iyo dhamaan dadka oo dhan.
Title: XAQA GABADHA GABADH KASTA OO SOMALIYEED KU LEEDAHAY…